जापानमा आँधी वा भूकम्पको बारेमा के गर्ने - Best of Japan
जापानमा पनि टाइफून र भारी वर्षाबाट हुने क्षति विश्वव्यापी तापक्रमका कारण बढ्दो छ। थप रूपमा, भूकम्प प्राय: जापानमा हुन्छ। यदि तपाईंले जापानमा यात्रा गरिरहनु भएको बेला आँधी वा भूकम्प आयो भने तपाईंले के गर्नुपर्छ? अवश्य पनि, तपाईले त्यस्तो केसको सम्भावना देख्नुहुन्न। जे होस्, यो आपतकालको स्थितिमा काउन्टरमेजरहरू जान्न राम्रो विचार हो। त्यसो भए, यस पृष्ठमा, म जापानमा प्राकृतिक प्रकोप आउँदा के गर्ने भनेर छलफल गर्नेछु।
यदि तपाईं अहिले आँधी वा ठूलो भूकम्पले ग्रस्त हुनुहुन्छ भने, जापानी सरकारी अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस् "सुरक्षा सल्लाहहरू"। त्यस तरीकाले तपाईले भर्खरको जानकारी पाउनुहुन्छ। जे भए पनि, सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंसँग शरण लिनको लागि एक सुरक्षित ठाउँ छ। तपाईंको वरिपरिको जापानी मानिससँग कुरा गर्नुहोस्। यद्यपि, सामान्यतया जापानी व्यक्तिहरू अ speaking्ग्रेजी बोल्नमा राम्रो छैनन्, यदि तपाईं समस्यामा हुनुहुन्छ भने तिनीहरू अझै पनि मद्दत गर्न चाहन्छन्। यदि तपाईं कांजी (चिनियाँ वर्णहरू) प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ भने, तपाईं तिनीहरूसँग यस तरीकाले कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ।
धेरै टाइफुनहरूले जापानमा हरेक वर्ष जुलाईदेखि अक्टुबरको शुरुमा हडताल गर्दछ। अन्य मौसमहरूमा पनि, तपाईंले भूकम्प, भारी वर्षा, वा भारी हिउँको सामना गर्न सक्नुहुन्छ। यदि जापानमा यस्तो प्राकृतिक प्रकोप आयो भने निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं सुरक्षित ठाउँमा हुनुहुन्छ। यदि तपाईंसँग कुनै समस्या छ भने, कृपया आसपासका जापानी मानिसहरूसँग परामर्श गर्नुहोस् ...
मौसम र भूकम्पको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नुहोस्
सिफारिस गरिएको मिडिया र अनुप्रयोगहरू
गर्मी टाइफुन ओकिनावा एयरपोर्ट = शटरस्टकमा हिट गर्दै
मौसम पूर्वानुमानमा ध्यान दिनुहोस्!
मलाई विदेशबाट आएका यात्रुहरूले भनेको छ कि "जापानी मानिसहरु मौसम पूर्वानुमान मन पराउँछन्।" निश्चित रूपमा हामी मौसमको पूर्वानुमान हरेक दिन जाँच गर्दछौं। यो किनभने जापानी मौसम हरेक क्षण परिवर्तन हुन्छ। जापानमा मौसमी परिवर्तनका साथै टाइफुनहरू प्रायः गर्मी देखि शरद .तुसम्म हुन्छन्। यसबाहेक, हालसालै ग्लोबल वार्मिंगको प्रभावका कारण भारी वर्षाबाट हुने क्षति बढेको छ। थप रूपमा, भूकम्प र ज्वालामुखी विस्फोटहरू जापानमा प्रायः देखा पर्छन्।
यदि तपाइँ जापानको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने, म हामी भर्खरैको मौसम पूर्वानुमान जाँच्न सिफारिस गर्दछु। हामी टिभी, समाचार पत्र र अनुप्रयोगहरूमा मौसम पूर्वानुमानको अनुसरण गर्दछौं। यदि तपाइँ मौसमको पूर्वानुमान हेर्न चाहानुहुन्छ भने, म निम्न मिडिया र अनुप्रयोगहरूलाई सिफारिस गर्दछु: यदि तपाइँ यी प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ भूकम्प वा आँधीबेहरीको घटनामा तपाइँको यात्रा कार्यक्रम समायोजित गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
एक सुरक्षित स्थान सुरक्षित गर्नुहोस्!
यदि तपाईं दुर्भाग्यवश आँधी वा भारी वर्षाबाट प्रभावित हुनुहुन्छ भने, म तपाईंको होटलमा बस्न सिफारिस गर्दछु र
जानकारी एकत्रित गर्दै जब तपाईं आँधीबेहरी बाहिर पर्खनुभयो। मलाई लाग्छ यो मौसम सफा नभएसम्म होटलमा रहनु सुरक्षित छ।
तपाई आफैंलाई गम्भीर अवस्थामा फेला पार्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईले होई बाहिर जाँच गर्नुभयो जब आँधीको बखत तपाईंको अर्को स्थानमा सर्नको लागि। यस अवस्थामा, जानकारी स collect्कलन गर्नुहोस् कि छैन तपाईंको अर्को होटल पुग्न सुरक्षित छ वा छैन। यदि तपाईंको प्लेन वा ट्रेन निलम्बित गरिएको छ भने तपाईंले तपाईंको हालको स्थानमा होटलहरू खोजी गर्नु जति सक्दो चाँडो हुनेछ। यो जस्तो परिदृश्यमा, होटलहरू चाँडै पूर्ण रूपमा बुक हुनेछ त्यसैले कृपया जतिसक्दो चाँडो आरक्षण गर्नुहोस्।
Typhoons चाँडै पार हुनेछ, त्यसैले अब निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंसँग एक सुरक्षित ठाउँ रात र भोलि छ कि छैन तपाईं आफ्नो यात्रा को शेष मजा लिन सक्नुहुन्छ। आँधी वा ठूलो वर्षा पछि नदीको नजिक जान खतरनाक हुन्छ। कृपया यकिन गर्नुभए पछि मात्र यात्रा गर्नुहोस् त्यसो गर्न सुरक्षित छ।
यदि तपाईंले ठूलो भूकम्प भेट्नुभयो भने, अवस्था गम्भीर छ। बिजुली र पानी आपूर्ति बन्द हुन सक्छ
तपाईको होटेलमा भूकम्प छोटो समयमा धेरै पटक आउन सक्छ। त्यस्ता अवस्थाहरूमा, होटलका कर्मचारीहरूबाट सूचना र सल्लाह लिनुहोस्। जापानी भवन संरचना सामान्य भूकम्पको सामना गर्न पर्याप्त बलियो छ। जापानी होटल कर्मचारीहरु आफ्नो पाहुनाहरु को सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कोसिस गर्छन्। यो एक राम्रो विचार हो तपाईको होटेलको सुरक्षा बाट स्थिति लाई आकलन गर्न को लागी धेरै सकेसम्म नछोड्नुहोस्।
>> कृपया जापान मा आवास बुकिंग को बारे मा जानकारी को लागी यस लेख को संदर्भ गर्नुहोस्
सिफारिस गरिएको मिडिया
यदि तपाईं यो छवि क्लिक गर्नुहुन्छ भने, “NHK WORLD” को साइट एक अलग पृष्ठमा प्रदर्शित हुनेछ।
आपतकालिनको स्थितिमा भरपर्दो
जापानमा सब भन्दा व्यापक मौसम पूर्वानुमान र प्रकोप समाचारको साथ मिडिया एनएचके हो, जापानको राष्ट्रिय प्रसारण। जब हामी टाइफुन र ठूला भूकम्पहरूको बारेमा जानकारी चाहन्छौं, हामी प्राय: NHK प्रयोग गर्दछौं।
NHK विशेष गरी प्रकोप सूचना रिपोर्ट गर्न प्रतिबद्ध छ। उदाहरणको लागि, २०११ मा जब ग्रेट इस्ट जापान भूकम्प भयो, NHK ले पहिलो पटक प्रभावित क्षेत्रमा 2011०० कर्मचारी पठायो। त्यसैले यदि तपाईं टाइफुन वा प्रकोपबाट भर्खरको समाचार हेर्न चाहनुहुन्छ भने, म NHK प्रयोग गर्न सिफारिस गर्दछु।
NHK ले "NHK WORLD" संचालन गर्दछ जसले लगभग २० भाषाहरू जस्तै अंग्रेजी र चिनियाँलाई समर्थन गर्दछ। यदि तपाईं माथिको छविमा क्लिक गर्नुभयो भने, तपाईंलाई NHK WORLD को आधिकारिक वेबसाइटमा निर्देशित गरिनेछ।
छुट्टै पृष्ठमा बीबीसी मौसम पूर्वानुमान हेर्न यो छवि क्लिक गर्नुहोस्।
मौसम पूर्वानुमान हेर्दा प्रयोग गर्न सजिलो
"एनएचके वर्ल्ड" मौसम पूर्वानुमान र प्रकोप जानकारी प्राप्त गर्नका लागि धेरै भरपर्दो सामूहिक मिडिया वेबसाइट हो। जे होस्, जब तपाइँ मौसम पूर्वानुमान तुलना गर्नुहुन्छ, बीबीसी NHK वर्ल्ड भन्दा पढ्न सजिलो छ। अवश्य पनि, एनएचके जापानमा मौसम र प्रकोपहरूको बारेमा बढी जानकारी दिईन्छ। यद्यपि बीबीसी मौसम पूर्वानुमान पृष्ठ बुझ्नको लागि धेरै सजिलो छ। त्यसैले म बीबीसी को उपयोग सिफारिस गर्दछु।
NHK वर्ल्ड टिभी
>> आईफोन / आईप्याड / एप्पल टिभी
जापानमा राष्ट्रिय प्रसारक एनएचकेले माथि उल्लेख गरिए अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण "एनएचके वर्ल्ड" संचालन गर्दछ। "NHK WORLD TV" अनुप्रयोगको साथ, तपाईं सजिलैसँग यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण हेर्न सक्नुहुन्छ। यो अनुप्रयोग सामान्यतया मौसम पूर्वानुमान बाहेक जानकारी को एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान गर्दछ। यद्यपि, यदि जापानमा आँधी आउँदछ वा ठूलो भूकम्प आउँछ, यो अनुप्रयोगले तपाईंलाई धेरै विपत्ति रोकथाम जानकारी प्रदान गर्दछ। अनुप्रयोगसँग 500,000००,००० भन्दा बढी डाउनलोडहरू छन्।
"NHK WORLD RADIO" भन्ने नामको एक रेडियो अनुप्रयोग पनि छ, जसमा १०,००,००० भन्दा बढी डाउनलोडहरू छन्।
माथि उल्लेख गरिए अनुसार NHK WORLD TV वेबसाइटले कोरियाली, थाई र अरबी सहित, 35 भाषाहरू समर्थन गर्दछ।
जानकारी प्रदान गर्न सकिन्छ
यस अनुप्रयोगमा हेर्न सकिने जानकारीहरू निम्नानुसार छन्।
NHK विश्व आपतकालीन समाचार
J चेतावनी (राष्ट्रिय तत्काल चेतावनी प्रणाली)
यस अनुप्रयोगले आपतकालीन भूकम्प चेतावनी, सुनामी चेतावनी, विशेष मौसम चेतावनी, विस्फोटन चेतावनी, इत्यादि प्रदान गर्दछ ताकि जापानका विदेशी आगन्तुकहरू जापानमा शान्तिको साथ यात्रा गर्न सक्दछन्। जापानी, अंग्रेजी, कोरियाली, र चिनियाँ (परम्परागत र सरलीकृत): यो पाँच भाषामा प्रकोपको घटनामा मात्र आवश्यक जानकारी प्रदान गर्दछ।
म सुझाव दिन्छु कि तपाईले पहिले "NHK WORLD TV" हेर्नुहोस्। यो किनभने "NHK WORLD TV" नवीनतम स्रोतहरू अन्य स्रोतहरू भन्दा छिटो प्रदान गर्दछ। जे होस्, यदि तपाईंलाई आँधी वा भूकम्पको खतरा छ भने, म तपाईंलाई सिफारिस गर्दछु "सुरक्षा सल्लाह" पनि।
"सुरक्षा सल्लाहहरू" एक विशेष अनुप्रयोग हो जुन जापानी सरकारले आपत सम्बन्धी जानकारी प्रदान गर्न प्रयोग गर्दछ। त्यसकारण, जापानी सरकारबाट "सुरक्षा सल्लाहहरू" को साथ सिधा जानकारी जाँच गर्नु पनि एक राम्रो विचार हो।
निम्न पाँच भाषाहरू समर्थित छन्।
चीनियाँ (सरलीकृत / पारम्परिक)
Most वा माथीको भूकंपीय तीव्रताको साथ १० सबैभन्दा भर्खरका भूकम्पहरू यहाँ पुष्टि गर्न सकिन्छ।
तपाईं विशेष पोइन्टमा विशेष मौसम सचेतहरू जाँच गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं हालको ज्वालामुखी विस्फोट चेतावनी जाँच गर्न सक्नुहुन्छ।
गर्मी स्ट्रोक जानकारी
तपाईं तातो स्ट्रोकको वर्तमान जोखिम जाँच गर्न सक्नुहुन्छ।
चिकित्सा संस्था जानकारी
तपाईं मेडिकल संस्थानहरूको जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ जुन विदेशीहरूलाई स्वीकार गर्दछ।
तपाईं हस्तान्तरण र अपरेशन स्थिति मा जानकारी जाँच गर्न सक्नुहुन्छ।
निकासी सल्लाहहरू / निर्देशनहरू
तपाईं निकासी सल्लाहहरू साथै प्रत्येक स्थानीय सरकार द्वारा जारी निर्देशन र आश्रय जानकारी जाँच गर्न सक्नुहुन्छ। (केवल जापानी)
राष्ट्रिय सुरक्षा जानकारी
तपाईं जापानी सरकारले वितरण गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा सूचना मार्फत ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रहरूको जानकारी जाँच गर्न सक्नुहुनेछ।
तल सम्बन्धित लेखहरू छन्। त्यहाँ जापान को चार odतुहरु परिचय परिचय छन्। मैले मासिक आधारमा टोकियो, ओसाका, र होक्काइडोको लागि विस्तृत मौसम जानकारी प्रदान गर्ने लेखहरू पनि तयार पारेको छु। कृपया तिनीहरूलाई सन्दर्भ गर्नुहोस्।
यदि तपाइँ जाडोमा जाडोमा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने कुन प्रकारको यात्रा उत्तम होला? यदि तपाईंले कहिल्यै चिसो जाडोको अनुभव गर्नुभएको छैन भने, म पहिले होक्काइडो सिफारिस गर्नेछु। अर्को, म तोहोकु क्षेत्र र केही चुबु क्षेत्रहरू सिफारिस गर्दछु। अर्कोतर्फ, टोकियो, ओसाका, र क्योटो जस्ता सहरी क्षेत्रहरूमा, तपाईं हिउँबाट अवरोध बिना पर्यटकीय भ्रमणका साथै अन्य मौसमहरूको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ। यस पृष्ठमा, म पर्यटन स्थलहरू परिचय गर्दछु जुन म सर्दमा सिफारिश गर्दछु। सामग्रीको तालिका जापानको डिसेम्बर, जनवरी, फेब्रुअरीमा रमाईलो पहाडहरू: अनुभव स्कीइing र स्नोबोर्डिing लL्ग शहरहरू होक्काइडो र तोहोकुमा: हिउँ चाडहरू र अधिकमा रमाउनुहोस्! परम्परागत जापानी हिमपात दृश्य: शिराकागोगो आदि। चिसो समुद्रमा बग्दो बर्फ: आबाशिरी, शिरेटोको इत्यादि अनुभव अनुभव ( तातो स्प्रि)) हिउँ अनुभवको संसारमा जापानमा जाडोको जीवन डिसेम्बर, जनवरी, फेब्रुअरीमा जापानको मजा लिनुहोस् म जापानी जाडोमा हरेक महिनाको लागि लेखहरू बटुल्छु। यदि तपाईं त्यस्ता विवरणहरू जान्न चाहानुहुन्छ भने, कृपया तलको स्लाइड हेर्नुहोस् र तपाईंले भ्रमण गर्ने योजना गर्दै गर्नुहुने महिनामा क्लिक गर्नुहोस्। यदि तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ की जापानी जाडो मा कस्तो किसिमको कपडा लगाउँछन्, म यस विषयमा लेख पनि लेखें। यहाँबाट, म जाडोमा जापानको भ्रमण गर्ने बेला सिफारिस गर्न सक्ने पर्यटन स्थलहरूको परिचय दिनेछु। मैले जापानमा जाडोको वातावरणको आनन्द लिन यस पृष्ठमा मैले तपाईंलाई धेरै भिडियोहरू र छविहरू थपें। हिउँ परेको पहाडहरू: स्कीइ and र स्नोबोर्डि Exper अनुभव http://japan77.net/wp-content/uploads/2018/06/Diimar-dust.mp4 http://japan77.net/wp-content/uploads/2018/06/Hakuba- -47-पार्क-फिल्माइएको-शीर्ष-कुर्सी लिफ्ट।-हप्पो-नागानो-जापान.एम vv रूखहरू होर फ्रोस्ट, जाओ, यामागाता प्रान्त निशिहो सान्सोले जाडो को बिहानको वरिपरि, मत्सुमोटो, नागोनो, जापान ...
यदि तपाईं वसन्त (मार्च, अप्रिल, मे) मा जापान भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं केमा रमाउन सक्नुहुन्छ? यस पृष्ठमा, मँ परिचय दिन चाहन्छु जापानमा यात्रा गर्न कस्ता प्रकारका चीजहरू वसन्तमा लोकप्रिय छन्। वसन्त ,तुमा, तपाई धेरै फूलहरू देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै जापानमा चेरी फूल। जापानी द्वीपसमूह उत्तरदेखि दक्षिणमा धेरै लामो छ, त्यसकारण फूलहरू फूल्ने समयहरू देशभरि फरक फरक हुन्छन्। मेरो सिफारिश छ कि तपाईं फूलहरूको पूर्वानुमान जाँच गर्नुहोस् जहाँ तपाईं यात्रा गर्नुहुन्छ जहाँ फूलहरू फूल्दछन्। सामग्री सूची - मार्च, अप्रिल र जापानमा यात्राको लागि सिफारिश गरिएको "HANAMI" चेरी फूल देख्न रमाईलो गर्नुहोस् शिबा चेरी ट्रीजस्ता फूलहरू वसन्तमा रमाउन को लागी दृश्यहरू मार्च, अप्रिलमा जापानमा यात्राको लागि सिफारिश गरिएको छ र म हरेक महिनाको लागि लेखहरू स gathered्कलन गर्छु। जापानी वसन्त मा। यदि तपाईं त्यस्ता विवरणहरू जान्न चाहानुहुन्छ भने, कृपया तलको स्लाइड हेर्नुहोस् र तपाईंले भ्रमण गर्ने योजना गर्दै गर्नुहुने महिनामा क्लिक गर्नुहोस्। यदि तपाईं जान्न चाहानुहुन्छ जापानीहरूले कस्तो किसिमको कपडा वसन्त wearingतुमा लगाउँदछन् भने, म लेख पनि लेख्छु जुन यी शीर्षकहरूमा छलफल गर्दछ, त्यसैले यी सुविधाहरू प्रयोग गर्न स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस्। यस पृष्ठमा, म तपाईंलाई विशेष रूपमा बताउन चाहन्छु जब तपाईं वसन्त inतुमा जापान आउँदा तपाईं केमा रमाउन सक्नुहुन्छ। "HANAMI" चेरी ब्लास्म्स हेर्दै रमाईलो गर्नुहोस् चेरी ब्लासम पत्तीहरू स्ट्रिमिंग पानीमा खस्दै। हिरोसाकी कासल, जापान = शटरस्टक टोकियो भीड उनो पार्कमा चेरी खिलने उत्सवको आनन्द लिइरहेको छ = शटरस्टक वसन्तमा जापानको यात्राको लागि, म सिफारिस गर्न चाहन्छु ...
जापानमा गर्मी धेरै तातो छ। यद्यपि जापानमा अझै पनि परम्परागत ग्रीष्म alsतु र ठूला आतिशबाजी उत्सवहरू छन्। यदि तपाईं उत्तरमा होक्काइडो वा होन्शुका पर्वतहरूमा जानुभयो भने, तपाईंलाई फूलहरूले भरिएको अद्भुत मैदानहरू स्वागत गरिनेछ। आश्चर्यजनक सुन्दर समुद्री तटहरू पनि यो मौसममा भ्रमण गर्न आकर्षक क्षेत्रहरू छन्। यस पृष्ठमा, म तपाईलाई जापान मा गर्मी को मजा लिन सक्छन् कसरी वर्णन गर्दछ। जापानमा जुन, जुलाई, जुलाईमा भ्रमणका लागि सिफारिस गरिएको सामग्री: अगस्त, जापानमा ग्रीष्म festivतुहरूको आनन्द लिनुहोस् होक्काइडो वा होन्शु पठारको रमाईलो समय ओकिनावाको सुन्दर समुद्री तटमा समय ग्रीष्म जापान भ्रमण गर्ने समय हेर्नका लागि सिफारिश गरिएको जुन, जुलाई, अगस्त म जापानी गर्मी को हरेक महिना को लागी लेख भेला। यदि तपाईं अधिक विवरणहरू जान्न चाहानुहुन्छ भने, कृपया तलको स्लाइडर प्रयोग गर्नुहोस् र तपाईंले भ्रमण गर्ने योजना गर्दै गर्नुहुने महिनामा क्लिक गर्नुहोस्। यदि तपाईं जापानका मानिसहरूले ग्रीष्म whatतुमा कस्तो खालका लुगाहरू पहिरिएका छन् भन्ने जान्न चाहानुहुन्छ भने, म तपाईंको बारेमा रमाइलोको लागि यस विषयमा लेख पनि लेखें। यहाँबाट, म पर्यटन स्थलहरू सिफारिश गर्दछु जुन म ग्रीष्म Japanतुमा जापान यात्रा गर्दा सिफारिस गर्न सक्छु। मैले तपाईंलाई जापानको ग्रीष्म atmosphereतुको वातावरणको कल्पना दिन यस पृष्ठमा धेरै फोटोहरू र भिडियोहरू थपेँ। जापानमा ग्रीष्म alsतुहरूको आनन्द लिनुहोस् यो भिडियोले प्रत्येक अगस्तमा हिरोशिमा प्रान्तमा मियाजिमामा आयोजित फटाक महोत्सव देखाउँदछ। गर्मी को समयमा जापान मा धेरै चाडहरु छन्। यी चाडहरुमा केहि मानिसहरु लाई परम्परागत किमोनो लगाउँदछन्। तपाईं प्रदर्शन वा घटनाहरू हेर्न सक्नुहुन्छ जुन ...
यदि तपाईं गिरावटमा जापान जाँदै हुनुहुन्छ भने, कस्तो किसिमको यात्रा सबैभन्दा रमाइलो छ? जापानमा वसन्त withतुको हिसाबले शरद theतु सबैभन्दा सहज मौसम हो। जापानीज द्वीपसमूहको पहाड रातो र पहेंलो रंगमा शरद colorsतुमा निर्भर गर्दछ। कृषि बाली शरद inतु मा कटाई र स्वादिष्ट भोजन को मजा लिन सकिन्छ। यस पृष्ठमा, म सिफारिश गरिएका स्थानहरू परिचय दिन चाहन्छु यदि तपाईं जापानमा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ। सामग्रीको तालिका सेप्टेम्बर, अक्टुबर, नोभेम्बरमा जापान भ्रमण गर्न सिफारिस गरिएको क्योटो र नारा जस्ता परम्परागत शहरहरू सुन्दर छन्। सेप्टेम्बर, अक्टुबर, नोभेम्बरमा जापानमा यात्रा गर्न सिफारिश गरिएका पहाडका शरद पातहरू पनि जान सिफारिस गरिन्छ। महिना जापानी शरद .तु मा। यदि तपाईं त्यस्ता विवरणहरू जान्न चाहानुहुन्छ भने, कृपया तलको स्लाइड हेर्नुहोस् र तपाईंले भ्रमण गर्ने योजना गर्दै गर्नुहुने महिनामा क्लिक गर्नुहोस्। यदि तपाईं जान्न चाहानुहुन्छ कि जापानीहरूले शरद whatतुमा कस्तो किसिमका लुगाहरू लगाइरहेका छन् भने, मैले लेख पनि लेखें जुन यसलाई प्रस्तुत गर्‍यो, त्यसैले यदि तपाईंलाई आपत्ति छैन भने पृष्ठ भ्रमण गर्नुहोस्। क्योटो र नारा जस्ता परम्परागत शहरहरू सुन्दर छन् यदि तपाईं गिरावटमा जापानमा यात्रा गर्ने विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि परम्परागत शहर क्योटो वा नारा जस्तो पहिले गएँ। यस्तो शहरमा धेरै मन्दिर र मन्दिरहरू छन्। यी धेरै दृश्यहरू शरद inतुमा शरद inतुमा अधिक सुन्दर छन्। तपाईं मन्दिर र मन्दिरको वरिपरि हिंड्दा तपाईं स्फूर्ति लिन सक्नुहुनेछ। यो नोभेम्बरको दोस्रो आधा तिर हो ...